Iinoveli ezi-6 zolwaphulo-mthetho eziza kukuxhuma | IBezzia
UMaria vazquez | 10/06/2021 12:00 | Iindaba
Ngaba uyathanda ukufunda iinoveli zolwaphulo-mthetho? Ukuba olu hlobo lolona lukonwabisa kakhulu, qaphela izihloko esabelana nawe namhlanje. Ezi noveli zintandathu zolwaphulo-mthetho zisandula ukubetha iivenkile okanye ziza kungekudala, buza ngazo! Zibekwe kwiindawo ezahlukeneyo ezahlukileyo, bathembisa ukurhanela, ubuqhetseba, uxinzelelo ...
1 Ubomi obufihlakeleyo base-ularsula Bas
2 Ezinzulwini zobusuku
3 Usapho oluqhelekileyo
5 Isibhozo sokubulala okugqibeleleyo
6 Elowo kuye eyakhe
Ubomi obufihlakeleyo base-ularsula Bas
Umbhali: IArantza Portabales
U-ularsula Bas, umbhali ophumeleleyo, ukhokelela kubomi obunqabileyo eSantiago de Compostela. NgoLwesihlanu omnye ngoFebruwari uyaphuma endlwini yakhe aye kunikela intetho kwithala leencwadi kwaye akabuyi. Umyeni wakhe, uLois Castro, ukugxeka ukunyamalala kwakhe emva kweeyure ezingamashumi amabini anesine. U-ularsula, ohlala evalelwe kwigumbi elingaphantsiUyamazi umthumbi wakhe kakuhle - uyamthanda othungelwano athe wazivumela ukuba azisongele ngaphandle kokumelana naloo nto - kwaye uyazi ukuba kungekudala uza kumbulala.
Umhloli uSanti Abad, obuyiselwe kwimikhosi yamapolisa emva konyaka onesiqingatha wekhefu lokugula ngengqondo, kunye neqabane lakhe uAna Barroso, osandula ukubekwa njengosekela mhloli, baqala ukukhangela ngokungapheliyo ngoncedo lomkomishinala omtsha, u-Álex Veiga. Onke amanyathelo akho akhokelela ngakulo elinye ityala elingasonjululwanga: kaCatalina Fiz, wanyamalala ePontevedra kwiminyaka emithathu edlulileyo, nakwimbulali ekubonakala ngathi uthabathela umthetho ezandleni zakhe.
umbhali: UMikel Santiago
UMhleli: Uhlelo B
Ngaba ubusuku obunye bunokuphawula ikamva labo bonke abo baphila kulo? Ingaphezulu kweminyaka engamashumi amabini idlulile okoko inkwenkwezi yedwala eyancipha u-Diego Letamendia wagqibela ukudlala kwidolophu yakhe i-Illumbe. Obo babubusuku bokuphela kwebhendi yakhe kunye neqela lakhe labahlobo, kananjalo nelo ukunyamalala kukaLorea, intombi yakhe. Amapolisa zange akwazi ukucacisa ukuba kwenzeke ntoni kule ntombazana, yabonwa iphuma ngaphandle kweholo yekonsathi, ngokungathi ibaleka into okanye umntu othile. Emva koko, u-Diego waqalisa umsebenzi wakhe ngempumelelo kwaye akazange abuyele edolophini.
Xa elinye lamalungu emigulukudu lisweleka kumlilo ongaqhelekanga, u-Diego ugqiba kwelokuba abuyele e-Illumbe. Iminyaka emininzi idlulile kwaye ukudibana nabahlobo bakudala kunzima: akukho namnye kubo osengulo mntu babenjalo. Ngelixa, Ukukrokrela kukhula ukuba umlilo khange ube ngengozi. Ngaba kunokwenzeka ukuba yonke into inxulumene kwaye, ekuhambeni kwexesha, uGeorge unokufumana imikhondo emitsha malunga nokwenzekileyo noLorea?
umbhali: UMattias Edvardsson
UAdam no-Ulrika, isibini esitshatileyo esiqhelekileyo, bahlala kunye nentombi yabo eneminyaka elishumi elinesibhozo uStella kwindawo emnandi ngaphandle kweLund. Ngokwembonakalo, ubomi bakhe bufezekile ... kude kube lusuku olunye le mbono incitshisiweyo kwiingcambu zayo xa UStella ubanjiwe ngokubulala indoda ngenkohlakalo phantse iminyaka elishumi elinesihlanu emdala kuye. Utata wakhe, umfundisi wecawe ohlonishwayo waseSweden, kunye nomama wakhe, igqwetha elaziwayo kwezokhuselo, kuya kufuneka baphinde bacinge ngemilinganiselo yabo yokuziphatha njengoko bemkhusela bezama ukuqonda ukuba kutheni engoyena mrhanelwa ophambili kulwaphulo mthetho. Baza kude kangakanani ukukhusela intombi yabo? Ngaba uyazi ngokwenene ukuba kunjani? Kwaye okukhathaza nangakumbi: ngaba bayazana?
umbhali: UJoachim B. Schmidt
UMhleli: Iintlelo zeGatopardo
UKalmann Óðinnsson ngoyena mmi wokuqala waseRaufarhöfn, ilali encinci yokuloba ekumda ongafikelelekiyo e-Iceland. Uneminyaka engamashumi amathathu anesine ubudala, une-autistic, kwaye nangona ejongwa ngabamelwane bakhe njengesidenge sasedolophini. Zonke ziphantsi kolawulo. UKalmann uchitha iintsuku zakhe ejikeleza amathafa amakhulu ajikeleze le dolophu isentlango, ezingela iimpungutye ezimanzi kunye nompu wakhe ongalinganiyo weMauser, nokuloba ookrebe eGreenland kulwandle olubandayo lweArctic. Kodwa, ngamanye amaxesha, ophambili wethu uhambisa iintambo kwaye uba yingozi kuye kwaye, mhlawumbi, kwabanye ...
Ngenye imini, uKalmann ufumanisa iphuli yegazi kwikhephu, ngokudibana ne ukunyamalala okukrokrisayo kukaRobert McKenzie, indoda esisityebi eRaufarhöfn. UKalmann sele eza koyiswa ziimeko, kodwa enkosi kubulumko bakhe obungenalwazi, ukusulungeka kwentliziyo yakhe kunye nesibindi, uya kubonisa ukuba, njengoko utatomkhulu wakhe wamxelele, i-IQ ayisiyiyo yonke into kobu bomi. Konke kuphantsi kolawulo…
Isibhozo sokubulala okugqibeleleyo
umbhali: UPeter swanson
Kwiminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo, umlandeli wenoveli eyimfihlakalo uMalcolm Kershaw wapapasha kwibhlog yencwadi yokugcina iivenkile apho wayesebenza khona ngelo xesha uluhlu- olwalufumana nakanye utyelelo okanye izimvo- ngokoluvo lwakhe ezona zenzo zolwaphulo-mthetho zifezekisiweyo kwimbali. Wayibiza ngokuba yi-Eight Perfect Murders kwaye wafaka ezakudala ngamagama amakhulu ohlobo olumnyama: Agatha Christie, James M. Cain, Patricia Highsmith ...
Kungenxa yoko le nto uKershaw, ngoku engumhlolo nomnini-venkile wevenkile encinci ezimeleyo eBoston, eqala ukubanjwa xa iarhente ye-FBI inkqonkqoza emnyango ngomhla obandayo kaFebruwari, ifuna ulwazi ngothotho olunqabileyo lokubulala okungasombululwanga okufana ngokungafaniyo .abo bakhethwe nguye kuluhlu oludala ...
Elowo kuye eyakhe
umbhali: ULeonardo Sciascia
UMhleli: Iimpawu zeTus
Umva kwemini ka-Agasti odikayo usokhemisti wedolophu encinci yaseSicilian ufumana umntu ongaziwayo apho bamgrogrisa ngokufa kwaye, nangona kunjalo, akabonisi ukubaluleka. Kodwa, kwiintsuku kamva, usokhemesti wabulawa ezintabeni kunye nomnye umntu wasekuhlaleni ohloniphekileyo, ugqirha uRoscio. Ngelixa amarhe akhutshiweyo abangela umonakalo ongenakulungiseka, kwaye amapolisa kunye ne-carabinieri babetha abangaboniyo, kuphela nguLaurana, oyinduna kodwa oqeqeshelwe ukuba ngumfundisi-ntsapho kwisikolo esiphakamileyo, olandela isikhokelo esinokukhokelela kumbulali. Ufumanise ukuba igama elingaziwayo lenziwe ngamagama asikwe kwiphephandaba lamaKatolika, u-L'Osservatore Romano, ekubeni ilogo yayo, i-Unicuique suum - "Kulowo nalowo, eyakhe" - ibonakala ngasemva kokunqunyulwa. Kwaye uzijula ​​ebomini babamelwane bakhe.
Zeziphi kwezi noveli ulwaphulo-mthetho ezitsala umdla wakho kakhulu? Ngaba ukhe wafunda nabaphi na ababhali beenoveli zolwaphulo-mthetho ngaphambili? Yabelana nathi ngezinye iinoveli zolwaphulo-mthetho obukade uyonwabela mva nje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Iinoveli ezi-6 zolwaphulo-mthetho eziza kukutsala